Ahoana ny fomba hijerena sy hisintomana sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaimpoana amin'ny iPhone sy iPad | Avy amin'ny mac aho
Androany dia miresaka momba ny iray amin'ireo lohahevitra mahaliana ny mpampiasa maro izahay: mijery sy misintona sarimihetsika maimaim-poana. Ny fisalasalana dia lehibe kokoa rehefa miresaka momba ny finday isika, ary vao mainka aza raha finday na tablety misy rafitra mihidy toa ny iOS izay ananantsika, izay manome antsika filaminana sy fitoniana lehibe kokoa indraindray, saingy tsy tsotra ny mampiasa azy tianay.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia hampianatra anao ny fomba hijerena sy hisintomana horonantsary, fa avy amin'ny iPhone / iPod Touch na iPad anay. Raha irintsika jereo izy ireo ao mivantana, izany hoe, raha tsy misintona azy ireo ianao, dia tsotra kokoa ilay zavatra, saingy tsy dia be loatra raha toa ny zavatra tadiavintsika dia ny misintona sarimihetsika maimaim-poana hankafizany azy ireo ivelan'ny Internet. Ho an'ireto farany dia mila misintona ny App Store izahay ary avy eo manolotra vahaolana roa hafa.
FIVAROTANA: raha te hijery sarimihetsika sy sarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad ianao dia azonao atao izao andramo maimaim-poana tanteraka ny Amazon Prime Video avy amin'ity rohy ity.
1 Ahoana ny fomba hijerena andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad anao
1.1 Miaraka amin'ny browser rehetra
1.2 Avy amin'ny rindranasa natao ho azy
2 Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad anao
2.1 Sintomy ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Video Web
2.2 Mampidina sarimihetsika amin'ny Amerigo
Ahoana ny fomba hijerena andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad anao
Miaraka amin'ny browser rehetra
Mety tsy izany ny valiny antenainao fa io no tsara indrindra. Raha manana fifandraisana Wi-Fi ianao amin'ny faritra tianao hijerena ny sarimihetsika dia tsara kokoa ny tsy misintona azy ireo, raha tsy mijery azy ireo. mivantana ao mivantana. Apple dia iray amin'ireo orinasa voalohany nihemotra tamin'ny teknolojia Flash ho an'ny pejin-tranonkala, ary enin-taona taorian'ny nanombohan'ny iPad dia manaporofo izy ireo fa dingana iray amin'ny làlana tsara.
Azavaiko izany satria mihatsara ny ankamaroan'ny pejin-tranonkala ary lasa mifanaraka amin'ny fitaovana toa ny iPhone / iPad sy ny Safari iza no tsy tia teknolojia taloha. Ny afaka manome olana bebe kokoa dia ny mpizara izay misy ny horonan-tsary, noho izany dia manolo-kevitra ny hitady ireo rohy misy aho StreamCloud.
Na dia fantatro aza fa misy pejy maro hafa, I Manoro ny roa manaraka aho satria hitako foana ny zavatra tadiaviko amin'ny iray na hafa:
Avy amin'ny pejy roa teo aloha dia aleoko Pordede Satria, ankoatry ny fananana rindrambaiko intuitive kokoa izay ahafahantsika manara-maso tsara izay efa hitantsika, dia manana vondrom-piarahamonina tena mavitrika izy ary noho ny fanehoan-kevitra azontsika atao intsony ny mahita zavatra tsy mendrika na mahita zavatra izay tsy ho nieritreritra mihitsy izahay hoe tsara be izany.
Avy amin'ny rindranasa natao ho azy
Azontsika atao koa ny mijery andian-tantara sy sarimihetsika amin'ny iPhone na iPad raha mampiasa rindranasa izay namboarina - amin'ny teôria - manokana sy manokana ho an'ity, toy ny voalohany amin'ireto manaraka ireto. Ny zavatra ratsy dia, araka ny ho hitanao amin'ny teboka manaraka, dia karamaina matetika izy ireo. Maninona no mandoa zavatra azontsika atao (jereo izy ireo nefa tsy ampidirinao maimaimpoana) maimaimpoana amin'ny Safari?
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad anao
Sintomy ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Video Web
Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra dia Lahatsary amin'ny Internet. Izy io dia mpizaha tranonkala izay natao hamakivakiana an'ity karazana pejin-tranonkala ity izay ahafahantsika milalao na misintona ireo sarimihetsika na toko amin'ireo andian-tantara tianay. Raha te hampidina sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny Web Web dia tsy maintsy manaraka ireo dingana ireo isika.
Izahay misintona ny fampiharana Video Downloader (manana ny rohy eto ambany ianao).
Manokatra Video Downloader izahay.
Mandeha amin'ny pejy toa an'i Pordede, HDFull izahay na ny safidinao tianao indrindra.
Izahay dia mizaha ary, rehefa mahita ilay horonan-tsary tianay sintonina dia miditra amin'ny fizarana rohy misy azy izahay, io fampiharana io ihany no hampiseho amintsika ny varavarankely pop-up miaraka amin'ireo rohy misy, ka tsy mila maka tahaka ireo rohy na mahazo fanina hisintona ny atiny.
Ao amin'ny varavarankely pop-up dia tsy maintsy misafidy "Play amin'ny fitaovana" isika hahitantsika azy amin'ny streaming na "Download" raha tiantsika ny misintona azy hahita azy io ivelan'ny Internet. Manana safidy ihany koa izahay handika ny rohy, saingy tsy ilaina izany ho anay. Ny fampiharana dia mamela fisintomana miaraka.
Ny dingana farany dia ny miandry ny fampidinana ho vita ary mankafy ny atiny avy amin'ny iPhone na iPad ivelan'ny Internet.
Horonan-tsary koa mamela antsika hilalao ny horonan-tsary amin'ny Apple TV na amin'ny Chromecastraha mbola tsy FLV ny endrika. Etsy ankilany, afaka manampy sarimihetsika avy amin'ny iTunes ihany koa isika, saingy mieritreritra aho fa raha te hampandeha azy amin'ny alàlan'ny iTunes isika dia manana safidy tsara kokoa, toa ny VLC.
Web Web - Mpilalao horonan-tsary€ 1,99
Sintomy ny sarimihetsika miaraka amin'ny Amerigo
Na dia tsara aza ny safidy teo aloha dia aleoko manokana tsy mametraka rindranasa izay tsy ilaiko. Mamelà ahy hanazava: ny Web Web dia tranonkala iray izay manamora kokoa ny fampidinana antsika, fa amin'ny maha-fitetezana azy dia mamela zavatra maro irina izy. Aleoko manana apetraka hafa browser mahery vaika kokoa toa an'i Amerigo ary, raha mila misintona horonantsary na andiana aho dia hikasika ireo rohy.
Ny fanontaniana dia ny fanaovana azy amin'ny iPhone na iPad tahaka ny fanaontsika azy amin'ny tranokala amin'ny birao birao: mivezivezy amin'ny alàlan'ny pejy fisintomana izahay, miditra amin'ireo rohy, mikasika ny fampidinana ary miandry ny famaranana. Ny fampiharana mitovy dia manolotra antsika ny fahafaha-mijery antontan-taratasy, mba hahafahanay mahita azy ireo mivantana na mizara ilay horonantsary hanokatra azy amin'ny mpilalao hafa, toa ilay voalaza VLC. Tsotra, nefa mandaitra.
Efa hainao ve ny mijery sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad-nao? Lazao anay ny fomba fanaonao taloha misintona sarimihetsika maimaim-poana ary zahao amin'ny fitaovana iOS anao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Sintomy ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad
vi2eo com dia hoy izy:
Hijery sarimihetsika (Espaniôla, Latina), andian-dahatsoratra, fanadihadiana, fantsom-pahitalavitra, Soccer maimaim-poana, tsy misy dokam-barotra (amin'ny tranonkala). Andramo ny vi2eo.com izay mihetsika hatramin'ny tapaky ny volana septambra 2015 ary efa manana rohy 29K mahery !!!
Mamaly an'i vi2eo com
Claudia Soriano Pérez dia hoy izy:
Ao amin'ny ipad ahy dia tsy avelako hijery na hisintona ireo horonantsary ireo
Valiny tamin'i Claudia Soriano Pérez
Aiza no misy ireo sarimihetsika alaina? Ary azoko jerena ve ny fandehan'ny fampidinana?
Juanp dia hoy izy:
Salama, fanampiana tsara azafady, efa ao amin'ilay anjara mivoaka hilalao amin'ny fitaovana aho, mandika ny rohy ary manafoana, saingy tsy misy fotoana ahazoako misintona, tsy haiko hoe maninona aho no manana iPhone 6s
Valiny tamin'i Juanp
Apple Pay koa dia ho tonga amin'ny faran'ny taona any Danemark sy ny Emira Arabo Mitambatra
Tombanana ho amidy 2,8 tapitrisa eo ho eo ny Apple Watch mandritra ny Q2